ऐन फाबरको कोटमा डीएनए माइकल पनहुजको नेतृत्व गरे तर धेरै ढिलो भयो! मार्टिन भिजल्याण्ड
ऐन फाबरको कोटमा डीएनए अब आधिकारिक घोषणाको अनुसार हुनेछ NOS बाट माइकल पनहुज को नेतृत्व गरे। एनीको कोट पहिले नै थियो3अक्टोबर भेटियो। माइकल डीएनए एनएनआईआईको डेटाबेसमा 100% निश्चित थियो। आखिर, माइकल यौन अपराधीको दोषी ठहरिएको थियो। माइकल हुनुपर्दछ र3अक्टोबरमा गिरफ्तार गरिएको थियो। यसको सट्टा माइकल केवल 8 अक्टोबरमा पुलिस आउनुभयो र9अक्टोबरमा गिरफ्तार गरियो। केवल हामी देख्न सक्छौं कि यो मामला एक मनोफोन हुनु पर्छ!
एनएफआईले6घण्टा भित्र डीएनए म्याच गर्न सक्छ। किनकि माइकल पनहुज एक सेक्स अपराधी थियो, यो स्पष्ट हुनु पर्छ कि उनको डीएनए 100% निश्चित रूप देखि डेटाबेस मा भएको छ। एनएफआईले द्रुत रूपमा लेख (2010 बाट) पाठमा हटाउनुभएको छ जसमा नयाँ प्रविधि व्याख्या गरिएको छ (हेर्नुहोस यहाँ)। सौभाग्य देखि, हामीले अझै पनि मूल पाठ पार्यौं Tweakers.net.
तपाईं यसलाई पढ्नुहुन्छ अघिल्लो लेख मलाई फेरि सोच्दै हामी किन यहाँ मनोचिकित्सकसँग सम्भव हुने सम्भव छ; एउटा मनोचिकित्सक यसको अर्थ थियो खारेज गरिएको बिल एडिथ शिपर्स द्वारा मान्छे द्वारा सामूहिक हुनुपर्दछ। मानिसलाई एक भयानक हत्यारामा विश्वास गर्नुपर्छ जसले मनोचिकित्सक अनुसन्धान गर्न चाहँदैनन् र चाँडै एउटा कानून पाउनेछ जसले सुनिश्चित गर्दछ कि जसले वातावरणको आँखामा भक्त व्यवहार देखाउँदछ जुन अवलोकनको लागि बन्द गरिएको हुन सक्छ। यो सबै सम्भावित सम्भावित मनोचिकित्सक वरिपरि भावनामा आधारित छ जुन "एनी" को खोज एक भयानक हत्यामा समाप्त हुन्छ।
स्रोत लिङ्क सूची: nos.nl, nrc.nl
किन माइकल पनहुजले अन फेबरको हत्यालाई स्वीकार गरे
नाथन फिडर, एनी फेबर को मित्र थियेटर + टोनलेग्रोप इम्पिमियम मा अभिनेता छ
ट्याग: एनी फेबर, साजिश, मृत्यु, विशेष, फेला पर्यो, hoax, शरीर, माइकल पनहुज, psyop, psyopp, छुटेको छ, मारियो
14 अक्टोबर 2017 मा 10: 50
यहाँ हामी फेला पार्छौं (सम्भवतः केहि संशोधित) जानकारी एक चोटि फेरि एनएफआई वेबसाइटमा फेला पर्दछ:
हो, यो (अब अचानक) स्टीयरिंग जानकारी हो किनभने सटीकता कम हुनेछ, तर यदि मिकेल डीएनए जैकेटमा फेला पर्यो भने, यसले उनलाई उठाउन पर्याप्त भएको थियो। त्यसैले जो कोहीले यो इन्कार गर्न इन्कार गर्दछ यो मात्र इन्कार गर्न चाहन्छ। हामी त्यो संज्ञानात्मक विचलनलाई फोन गर्दछौं।
14 अक्टोबर 2017 मा 11: 46
बिस्तारै आज एक जना विशेषज्ञ हुनेछ, जो भन्छन् कि यो धेरै जटिल छ र वास्तवमा त्यो लामो समय लाग्न थालेको छ?
"यो पउ हो। हामी सुरु हुँदैछौं ... ... "
14 अक्टोबर 2017 मा 11: 57
उदाहरणका लागि यो सज्जन; फ्रान्स डी ग्रोट ... एस केसबाट जान्छ
14 अक्टोबर 2017 मा 12: 05
आह! त्यो समस्या हो! एनएफआईको कर्मचारी कमजोरी छ! यो अपेक्षा गरिएको थियो!
14 अक्टोबर 2017 मा 12: 08
चाँडै सबैले 'राज्यको निपटानमा' (टिबीएस) खडा गर्न सक्नेछन्। उदाहरणका लागि, यदि तपाईंको साइकल लाइटले काम गर्दैन वा तपाईंको व्यवहारलाई मनपर्दैन। टीबीएसमा उनीहरूले अनिश्चितकालीन रूपमा सुरक्षित र उपचार गर्न सक्छन्। टीबीएस पनि सजाय होइन तर एक उपाय होइन। र यदि न्यायाधीशलाई यो आवश्यक छ भने सबैलाई मापन गर्न सकिन्छ।
14 अक्टोबर 2017 मा 16: 06
"कानूनसँग गति बनाउनुहोस् जसले यसलाई प्रयोग गर्न नसकेको बनाउँदछ"
यो सबै प्रकारका सन्देशहरूबाट पहिले नै देखाउँछ कि यो पहिले नै शेल्फमा थियो।
म मनोरञ्जनमा कर्मचारीहरु बाट प्रतिक्रियाहरु (फेसबुकमा) जो पूर्णतया भ्रमित हुन्छन्।
14 अक्टोबर 2017 मा 12: 11
तपाईं वास्तवमा जासूस को लागि अध्ययन गर्न छैन कि यो कथा पुरा तरिकाले उल्लङ्घन हो।
त्यसोभए, पुलिसले एक सानो पद्धति छ कि तिनीहरूले पहिले मानिसलाई उठाएको थिएन भन्दा पनि असीमितताबाट मुक्त भएको थियो। त्यो संधै धेरै व्यापक रूप मा मापा, "अनिश्चितता"। उहाँ सबैको पछि अनुहारमा हुनुहुन्थ्यो, र तिनीहरूले उसलाई खुशीसाथ जान दिए र सबै मिडियामा स्पष्ट थियो।
त्यो यी कुराहरूको ती मानिसहरू देखाउँछ (मोर, डीडीडडीडी, आदि) उनीहरूको गालहरूमा ब्लश छैन। सम्भव छ तपाईंले यसलाई कसरी व्याख्या गर्नु पर्छ।
15 अक्टोबर 2017 मा 17: 27
एक विषय मार्टिन बन्द: 19.35 घण्टा मा अन्तिम रात (वैकल्पिक साइट मा आफ्नो स्मार्टफोन मा, म जो थाहा छैन) मेरो छोरा प्रतिक्रिया तपाईं थियो जो एक कुरूप सन्देश, ... र मेरो छोरा लेखे: "तपाईंले च्याट गर्न सधैं जानु पर्छ मार्टिन Vrijland, तपाईं सधैं यो कालो बनाउन तपाईंले आफैलाई कुलीन / AIVD नियन्त्रणमा छन् किनभने, र! "... त्यहाँ धेरै टिप्पणीहरू मेरो छोरा भन्नुभयो थिए, र 19.40 घण्टा उहाँले प्रतिबंध प्राप्त! त्यसैले मार्लिन, तपाईं सही हुनुहुन्छ, हामीले यसलाई यहाँ देखेका छौ
अब तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ कि स्वतन्त्रता गायब भएको छ, विचित्र संवेदी!
15 अक्टोबर 2017 मा 18: 24
मैले सोधे कि कुन साइट, जुन थियो: त्यो फेसबुकमा वैकल्पिक मिडिया नेदरल्याण्डमा थियो।
15 अक्टोबर 2017 मा 18: 28
अर्को शब्दमा, AMN राम्रो छैन वा! के कुलीन पछि, यो फरक छैन!
16 अक्टोबर 2017 मा 09: 06
त्यो यो सम्पूर्ण प्रदर्शन राम्रो छैन स्पष्ट छ। त्यहाँ जान जान्छ। एक वा धेरै दलहरू झूट बोल्छन्।
केवल अभियुक्त को गिरफ्तारी पछि यो सन्देश को पालन गरे:
प्रहरीले आशा गरेको थियो कि माइकल पी को गिरफ्तार भएको थियो। हराएको एनी फेबर चाँडै भेट्टाउनेछ। तर एक दिन पछि, त्यहाँ अझै पनि 25 पुरानो यूट्रेटको कुनै ट्रेस छैन र खोजी बुधवार अचानक जारी छ।
अब त्यो त्यो 'भेटिएको' छ खबर अचानक पूर्ण फरक छ:
द टेलीग्राफ अनुसार मेल खाने पहिलेको विश्वस्तता डच अदालती संस्थान को डीएनए डेटाबेस मा समावेश गरिएको थियो पछि, प्रोफाइल पी संग ज्याकेट ट्र्याक। को अभियोजन लागि प्रवक्ता सबै निष्कर्ष यो ओम अब छानबिन को ब्याज मा कुनै पनि बयान गर्न चाहन्छ थप अनुसन्धान मा आइतबार बिहान पी "मा छानबिन नेतृत्व गरेको को छैन छुटकारा गरिनेछ 'र किनभने पी सीमा छ।
सार्वजनिक अभियोजकले वास्तवमा स्वीकार्छ कि मामला सही छैन।
पहिलो रिपोर्ट थियो कि (साइट पुलिस)
आइतबार 8 अक्टोबरले एक्सएनएनएक्सएक्स-वर्ष-उमेरको व्यक्तिलाई डेन डल्डरमा एक क्लिनिकमा फोन्सिसिक मनोचिकित्सा विभागमा अनुसन्धान जानकारीको नेतृत्व गरे। सार्वजनिक अभियुक्त सेवा र पुलिसले संदिग्ध तुरुन्त पक्राउ गर्ने निर्णय गरेन, आशामा उसले एनीलाई अनुसन्धान टोलीको नेतृत्व गर्नेछ। त्यसकारण उहाँ राम्ररी हेरचाह गर्नुभयो। जब त्यो सोमबार दोहोरो भएको थिएन, त्यो गिरफ्तार गरियो।
कसरी सम्भव छ कि त्यो एक संदिग्ध को रूप मा योग्य छ, ऐनी को कोट संग उनको डीएनए संग मेल खाने? तिनको डीएनएसँग धेरै समयसम्म ओएम थियो। त्यसोभए तिनीहरू जान्थे एक संदिग्ध भागलाई चल्दैनन्? तिनीहरूले कसरी माइकल पी। ट्रयाकमा गरे? तपाईले मात्र हेरेको छैन। उहाँ किन? उनीहरूको आँखामा कसैको थियो जो प्रहरीले चिनिन्थ्यो, जसको बारेमा उनीसँग पहिले नै उहाँको डीएनए छ। त्यसपछि तिनीहरूले उहाँलाई केही दिन हेरे, र उनी पुनर्जीवित हुन्छन् किनभने उनीहरूले "केही पनि" पाउन सक्दछन्। र त्यसपछि तपाईं केही दिन पछि सुन्नुहुन्छ कि एनीको कोट (केही दिन उनी हराइरहेको थियो) को माध्यमबाट उनी डीएनए मार्फत एक मिठो आउँथे र यसरी संदिग्धमा देखा पर्नुभयो? त्यो दिन एक संदिग्ध राष्ट्रीय रूपमा वास्तव मा एक अपराधी को रूप मा लेबल को रूप मा लेबल गरिएको थियो।
यहाँ किन झगडा भइरहेको छ? यो सम्पूर्ण कुराले जवाफ दिईएको भन्दा बढि प्रश्नहरू उठाउँदछ।
16 अक्टोबर 2017 मा 21: 42
@Openyoureyes। 'पुनर्जीवित' गलत देखिन्छ, तर अझै पनि राम्रो छ। एक नुहाउने काम एक गिरफ्तारी बारे एक अजीब कहानी हो। ????
16 अक्टोबर 2017 मा 22: 06
टाइपो त्रुटि, हुन सक्छ ????
« किन माइकल पनहुजले अन फेबरको हत्यालाई स्वीकार गरे
पीटर आर। डे वेजले एनी फेबर मनोचिकित्सकलाई बुबाको शिकार माइकल पी को बारे मा सन्देश संग कताई जारी राखन मद्दत गर्दछ। »
कुल भ्रमण: 15.961.580
मार्टिन भिजल्याण्ड op ट्रान्सजेंडर पुरुषले एक महिला शुक्राणु दातासँग एक गैर बाइनरी पार्टनरको बच्चालाई जन्म दिन्छ
मार्कोस op ट्रान्सजेंडर पुरुषले एक महिला शुक्राणु दातासँग एक गैर बाइनरी पार्टनरको बच्चालाई जन्म दिन्छ
Riffian op चीनबाट कोरोनाभाइरस विश्वव्यापी खोप दायित्व को लागी उत्तम alibi प्रदान गर्दछ
SandinG op लिबियाले स्पष्ट पार्छ कि युरोपमा कुन देशहरू टर्कीले लिनेछ
मार्कोस op आजका युवाहरू पुनः-शिक्षा शिविरहरू (ग्लागहरू) जलवायु नकार्न भर्न चाहन्छन्